दलान नेपाल : हामी उत्साहित छौ - वेदप्रकाश – प्रमुख, हिन्दू स्वंयमसेवक संघ, नेपाल
हामी उत्साहित छौ - वेदप्रकाश – प्रमुख, हिन्दू स्वंयमसेवक संघ, नेपाल
at 9:44 PM Posted by Dalan
भारत आसामका वेदप्रकाश उपाध्याय विगत चार बर्ष देखि हिन्दू स्वंयसेवक संघ नेपालका प्रमुखको रुपमा काठमाडौमा सक्रिय छन । वेदप्रकाशजीको नामले जानिने उनी भन्छन, दोस्रो संविधानसभाको परिणमले हामी उत्साहित छौ । उनीसंग गरिएको कुराकानी -
हामी ढुक्क के मा छौ भन्ने अब कम से कम हिन्दू राष्टको वारेमा जनमत संग्रहको वातावरण बन्छ ।
हिन्दू राष्टको वारेमा जनमत संग्रह होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । र त्यसका लागी हामी राजनिती माहौल तयार पार्दै छौ ।
साकारात्मक कुरा त के हो भन्ने कांग्रेस ठुलो पार्टीको रुपमा आएको छ । जाहा धेरै हिन्दूवादीहरु छन ।
विजेपी सत्तामा आउदा त्यसले नेपालको वारेमा धेरै फरक नपर्ला खाली हामीलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ ।
वेदप्रकाश – प्रमुख, हिन्दू स्वंयमसेवक संघ, नेपाल
हिन्दू धर्मको नारा दिएर राप्रपा नेपाल चौथौ शक्तिको रुपमा आउदा त तपाईहरु खुशी हुनुभएको होला नि ?
- होईन, हामी कसैको एउटाको समर्थन वा विरोध गर्दैनौ । तर हिन्दू धर्मको रक्षाको लागी जो जो अगाडी आउछ, सबैलाई सहयोग गर्छौ । जाहा सम्म यो निर्वाचनको परिणामको कुरा गर्नु हुन्छ, निश्चित रुपमा हामी उत्साहित भएका छौ । हामी कुनै व्यक्ति विशेष वा पार्टी विशेष केन्द्रित थिएनौ तर हिन्दू धर्मको वारे हामी सबै ठाउवाट साकारात्मक वातावरण वनाउने काम चाही गरेकै हौ । जसको फाईदा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले लिएको छ । त्यसको विभिन्न कारणहरु छन ।
उसो भए के अब नेपालमा हिन्दूत्वको नारा राजनितीक रुपमा अगाडी वढछ त ?
- हेर्नुस सबै पार्टीहरुमा हिन्दूवादीहरु छन । अब त्यो सबै अगाडी आउनेमा हामी विश्वस्त छौ । साकारात्मक कुरा त के हो भन्ने कांग्रेस ठुलो पार्टीको रुपमा आएको छ । जाहा धेरै हिन्दूवादीहरु छन । हामी ढुक्क के मा छौ भन्ने अब कम से कम हिन्दू राष्टको वारेमा जनमत संग्रहको वातावरण बन्छ ।
ए, उसो भए हिन्दू राष्टको वारेमा तपाईहरु जनमत संग्रह होस भन्ने चाहन्नु हुन्छ ?
- हो हिन्दू राष्टको वारेमा जनमत संग्रह होस भन्ने हाम्रो चाहना हो । र त्यसका लागी हामी राजनिती माहौल तयार पार्दै छौ ।
तर कमल थापाले नै हिन्दू राष्ट र राजतन्त्रको मुद्धालाई छाडने संकेत गरेका छन त ?
- हामी कुनै पार्टी विशेष वा व्यक्ति विशेष छैनौ । हो कमल थापाले पाएको सभासदको संख्यामा हाम्रो विभिन्न भुमिका अहम छ । तर हामी उनी प्रती मात्रै केन्द्रित छैनौ । हाम्रो मान्छे अर्थात हिन्दूवादी सबै पार्टी धेरैको संख्यामा छन त्यसैले अब चाडै एउटा साकारात्मक माहौल तयार हुन सक्छ ।
के भारतमा विजेपीले सत्तामा आउने लागको छाटकाटले त्यस्तो माहौल बन्छ भन्ने तपाईहरुको बुझाई हो ?
- भारतमा विजेपी सत्तामा आउन लागेको कुराले हामी मात्रै होइन कि संसार भरीका हिन्दूहरु उत्साहित छन । हामी त झन नहुने कुरै भएन तर भारतमा विजेपी सत्तामा आउदा त्यसले नेपालको वारेमा धेरै फरक नपर्ला खाली हामीलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ ।
भारत आफै धर्मनिरपेक्ष छ अनि नेपाल चाही किन हिन्दू राष्ट हुनु पर्यो भनेर त्याहाका हिन्दुवादी नेताहरु लागी परेको देखिन्छ ?
- भारतको स्वयंम अनुभवले हामी अली चिन्तित छौ ।
राजपरिवारसंग पनि त यसवारेमा कुराकानी भइरहेको होला नि ?
- होईन, हाम्रो राजपरिवार संग औपचारिक रुपमा कुनै सम्बन्ध छैन । नेपाल जनताले राजपरिवारलाई फालिसकेका कारण हामी त्यसको पक्षमा छैन । नेपाली जनता हिन्दू राष्टको पक्षमा छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । निर्वाचनको जनमतले पनि त्यो देखाउछ । त्यसैले हामी हिन्दू गणतन्त्रको पक्षमा छौ ।